झण्डै दोब्बर ठूलो लोसपाले एमालेलाई सघाउँदा मधेशमा पाँचदलीय गठबन्धनको पोजिसन के ? « News24 : Premium News Channel
झण्डै दोब्बर ठूलो लोसपाले एमालेलाई सघाउँदा मधेशमा पाँचदलीय गठबन्धनको पोजिसन के ?
काठमाडौं । आज माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ । मुलुकभर हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा १९ सिटका लागि ४३ जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा ५ दलिय गठबन्धनको समिकरण बलियो छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समिकरण कमजोर देखिएको छ । कतिय प्रदेशहरुमा उसले गठबन्धन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जसमा मधेश प्रदेशमा एमालेले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग गठबन्धन गर्ने सहमति गरेको छ ।
मधेस प्रदेशमा एमाले र लोसपाबीच गठबन्धन गर्ने सहमति एमाले मधेस प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रामऔतार यादव र लोसपा मधेस प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले गरेका हुन् ।
यसबाहेक अन्य प्रदेशहरुमा लगभग एकाले एक्लै पाँच दलीय गठबन्धनसँग भिड्नेछ । यो अवस्थामा एमाले गठबन्धनसामु अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा भने एमालेले लोसपासँग गठबन्धन गरेको अवस्थामा नतिजा कस्तो आउला ? भन्ने कौतुहलता पनि बढेको छ । तर काैतुहलतालाइ सहजै लिनुपर्ने अवस्था छ । किनकि साे अवस्थामा पनि पाँच दलीय गठबन्धन नै हावी हुनेमा दुइ मत छैन ।
मधेश प्रदेशमा दुई सिटमा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धनका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसका लागि गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाएका छन् । उता लोसापाले भने छुट्टा छुट्टै उम्मेदवार उठाएका छन् । तर उनीहरुले एक अर्कालाई सघाउने छन् ।
गठबन्धनले मधेस प्रदेश महिलातर्फ माओवादी केन्द्रबाट उर्मिला अर्याल, एमालेबाट विना देवी, लोसपाबाट रुपाकुमारी यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यस्तै अन्यमा समूह तर्फमा जसपाबाट महमद खालिद र एमालेबाट उसमान अंसारीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
हेरौँ मधेशको उम्मेदवारहरुको मतभार
मधेश प्रदेशमा जम्मा १०४ जना सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख २ सय ६९ रहेका छन्।
सांसदको मतभार ४८ हो भने प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हो । जसको जम्मा मतभार ९ हजार ८७० हुन्छ ।
मधेशमा (पाँच दलीय गठबन्धन)रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको मात्रै मतभार ७ हजार ३०२ हुन्छ। यस आधारमा पाँच दलीय गठबन्धनसामु एमाले र लोसपाले पराजित हुनुको विकल्प देखिदैन ।
मधेशमा एमालेको सांसद संख्या ८, प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या ३० रहेको छ । जसको मतभार ९ सय २४ मात्रै हुन्छ । त्यस्तै एमालेलाई सघाउने लोसपाको सांसद संख्या मधेशमा १६, प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या ४४ रहेको छ । उसको मतभार १५ सय ६० हुन्छ ।
मधेशमा एमालेभन्दा बलियो लोसपाले एमालेलाई सघाउने छ । र, एमलेले पनि लोसपालाई सघाउनेछ । तर उनीहरुको दुवैको मतभार जोड्दो २४८४ मात्रै हुन्छ । यो अवस्थामा गठबन्धनसामु एमाले र लोसपाको पराजय निश्चित छ ।